Maze Alpha နှင့် Comet ကို GearBest နှင့် eBay တွင်ရောင်းချသည် Androidsis
Maze Alpha နှင့် Comet ကို GearBest နှင့် eBay တွင်ရောင်းချသည်
သင်ဖတ်ရှုသည့်အတိုင်း ဒီကိရိယာနှစ်ခုဟာကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်အတွက်ခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အထူးလျှော့စျေးတစ်ခုဖြစ်တယ်မရ။ Maze Alpha ကို GearBest တွင် ၁၄၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်ရနိုင်သည် ၎င်း၏မူရင်းစျေးနှုန်းဖြစ်သော ၁၈၉ ဒေါ်လာအစားဥရောပအတွက် Maze Comet သို့ Ebay တွင် ၁၅၉.၉၉ ယူရိုအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒီစမတ်ဖုန်းနှစ်လုံးဟာအလယ်အလတ်တန်းစား Android မှာရှိပါတယ်Androidsis မှသင့်အား၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုရရှိရန်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။ အပေါ် Read!
ဝင်္ 2018 သည်သူ၏တစ်နှစ်ဖြစ်လိုသည်, နှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အစပိုင်းတွင်အချို့သောကမ်းလှမ်းမှုများသည်စျေးကွက်ထဲနေရာလွတ်စေရန်မအောင်မြင်ပါ။
1 Maze Alpha ထူးခြားချက်များ
Maze Alpha ထူးခြားချက်များ
ဒီကိရိယာတွင် ၂၆% လျှော့စျေးရှိသည် Gorilla Glass protection ဖြင့် ၆ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပါသည် တစ်စက်, ခြစ်ခြင်းနှင့်ပြန်တယ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် 25GB RAM နှင့် 4GB internal storage သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ Mediatek Helio P32 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
လည်း 13 +5megapixels ရှိသောကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားသည်နှင့်အခြား 5MP သာရှေ့မျက်နှာစာသည်ဗီဒီယိုချတ်များနှင့်ကျော်ကြားသော selfies များအတွက်ဖြစ်သည်။
၄၀၀၀ mAh Battery တပ်ဆင်ထားပြီးလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်သည်နှင့် Android 7.0 Nougat ကိုသေတ္တာထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
Gorilla Glass 18 နှင့်အတူ ၅.၇ လက်မ 9: 2.5 5.7D HD မျက်နှာပြင်ရှိသည်6750-core Mediatek MT1.5T ပရိုဆက်ဆာအများဆုံးကြိမ်နှုန်း 760GHz၊ Mali-T2MP4 GPU၊ 64GB RAM နှင့် 128GB Internal Memory ကို microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
13 megapixel ဆိုနီကင်မရာလည်းတပ်ဆင်ထားသည်f/ 2.0 aperture၊ LED Flash နှင့် 8 megapixel front တို့ပါဝင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 4000mAh ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ပြီး Android 7.0 Nougat ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Maze Alpha နှင့် Comet ကို GearBest နှင့် eBay တွင်ရောင်းချသည်
HTC U11 မျက်လုံးများ - ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်